Sidee Duulimaadku udub dhexaad ugu noqon karaa himilooyinka Boqortooyada Ingiriiska ee Boqortooyada Ingiriiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Sidee Duulimaadku udub dhexaad ugu noqon karaa himilooyinka Boqortooyada Ingiriiska ee Boqortooyada Ingiriiska
Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Gegada diyaaradaha Heathrow, terminal xamuul, CargoLogicAir Boeing 747-83Q (F) gudaha xamuulka xamuulka, July 2017.
Cilmi-baaris cusub ayaa muujineysa sida Boqortooyada Ingiriiska ay u mari karto udub-dhexaad dhaqaale kadib-Brexit, iyada oo ganacsiga aan ka tirsaneyn Midowga Yurub uu kordhayo 20% shanta sano ee soo socota laga bilaabo ku dhowaad £ 473 bilyan ee 2019 illaa billion 570 bilyan sannadka 2025.
Warbixinta cusub ee CEBR waxay muujineysaa sida duulimaadku udub dhexaad ugu noqon karo himilooyinka Boqortooyada Ingiriiska ee Boqortooyada Ingiriiska, ka caawinta warshadaha inay keenaan trade 204bn oo ah ganaax lacageed oo ka faa'iideysan kara gees kasta oo UK ah.
Heathrow, oo horeyba u sahlaysa ku dhowaad kalabar dhammaan ganacsiga Boqortooyada Midowday qiime ahaan wadamada CPTPP, ayaa ugu fiican in lagu caawiyo shirkadaha UK inay udub dhexaad u noqdaan oo ay kobciyaan ganacsiga leh dhaqaalo qiimo sare leh kadib Brexit.
Ka ganacsiga dalalka aan Midowga Yurub ahayn ee loo maro Heathrow wuxuu kori karaa 11% illaa 2025 iyadoo gobollada ku takhasusay soosaarka qiimaha sare leh, oo ay ku jiraan North East iyo Midlands, oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ​​inta badan maadaama Boqortooyada Midowday ay dejiso xiriirro ganacsi oo cusub
Sida laga soo xigtay Xarunta Dhaqaalaha & Cilmi-baarista Ganacsiga, duulimaadku wuxuu u baahan doonaa inuu udub dhexaad u yahay udubkan. Natiijooyinka ayaa tilmaamaya in qiimaha ganacsiga ee loo maro Heathrow ee dalalka aan ka tirsanayn EU uu kordhin karo 11% sanadka 2025, halka ganacsiga wadamada EU uu hoos u dhici doono 7% isla muddadaas. Gobollada Boqortooyada Midowday oo dhan waxay ka faa'iideysan doonaan xiriiriyadan ganacsi ee cusub, iyadoo Heathrow ay door muhiim ah ka ciyaareyso furitaanka suuqyo cusub oo qiimo leh oo ka yimaada Aasiya Baasifigga iyo Australia illaa Mareykanka.
Duulista ayaa muhiim u ah qorshayaasha Dowladda ee Global Britain-Brexit-ka kadib. Heathrow oo keliya ayaa awood u leh inuu fududeeyo bon 204 bilyan oo ganaax lacageed oo ka faa’iideysanaya ganacsiyada Ingiriiska ee gees kasta oo dalka ka mid ah, abuurista fursado dhammaan waaxda duulimaadyada iyo xoojinta isku xirka ganacsiga ee Boqortooyada Ingiriiska.
Si kastaba ha noqotee, kor u qaadista ganacsigan lama xaqiijin doono illaa warshadaha duulimaadka ee Boqortooyada Midowday ay taageeraan siyaasadaha Dowladda loona oggolaado inay dib u bilaabaan. Tirooyinka warshadaha ee May waxay muujinayaan in qaar ka mid ah tartamayaasha yurub ee ka faa'iideystay taageerada gaarka ah ee waaxda intii lagu jiray aafada, sida Netherlands iyo Jarmalka, ay arkayaan koritaanka ugu dhakhsaha badan. Culeyska xamuulka ee garoonka diyaaradaha ee Boqortooyada Ingiriiska ayaa weli hoos u dhacaya 19% heerarka 2019, marka loo eego Schiphol iyo Frankfurt labadaba oo ka sarre maray heerarkooda 2019, iyagoo koraya 14% iyo 9% siday u kala horreeyaan isla waqtigaas.
Daraasaddan ayaa timid iyadoo shirkadda Heathrow ay la shaqeyneyso British Airways iyo Virgin Atlantic si ay u bilaabaan tijaabooyin ujeeddadoodu tahay inay ka caawiyaan Dowladda iyo warshadaha inay fahmaan sida ficil ahaan loogu fududeeyo xannibaadaha saaran rakaabka si buuxda loo tallaalay, tallaabadaas oo fure u ah dib u bilaabista safarka iyo ganacsiga. Iyagoo ka faa'iideysanaya faa iidada tallaalka ee dalka, wasiirradu waxay gacan ka geysan karaan sidii loo gaarsiin lahaa dhiirrigelintan dhaqaale ee ganacsatada dhoofisa ee ku baahsan Ingiriiska, iyadoo la hubinayo in Boqortooyada Midowday ay sii haysato tartankeeda maaddaama waddanku ka soo baxayo qufulka.
Warbixinta Global Britain waxay muujineysaa:
Marka la gaaro 2025, qiimaha ganacsiga ee loo maro Heathrow wuxuu u kici karaa in ka badan £ 204bn (laga bilaabo £ 188bn ee 2019), taas oo ka dhigan 21.2% wadarta ganacsiga UK ee alaabada iyo 14.6% ganacsigeenna badeecadaha iyo adeegyada.
Kobaca ganacsigu wuxuu kobcin karaa qayb kasta oo ka tirsan Boqortooyada Midowday. Gobollada leh waxsoosaarka waxsoosaarka sare - oo ay kujiraan Midlands iyo North East - waxay u badan tahay inay ka faa'iideystaan ​​inta badan heshiisyada ganacsi ee mustaqbalka lala yeelanayo dhaqaalaha dhaqsaha badan ku koraya adduunka. Scotland iyo Wales ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara ganacsiga kordhay ee beeraha, dhirta iyo kalluumeysiga.
Heathrow wuxuu gacan ka geysan karaa wadista Heshiisyada Ganacsiga Bilaashka ah ee mustaqbalka - iyadoo 46% ganacsi ahaan qiimo ahaan leh waddamada CPTPP oo laga fududeeyay garoonka diyaaradaha - halka garoonka diyaaradaha loo qoondeeyay inuu door weyn ka ciyaaro heshiisyada lala galayo Mareykanka iyo Australia.
Heathrow waa fududeeyaha ugu weyn ee ganacsiga UK xisaabinta saddex meelood labo meel dhammaan ganacsiga lagu qaado hawada UK (qiime ahaan), iyada oo jaantuskani uu kor u dhaafay 75% ganacsiga aan ahayn Midowga Yurub.
Halka 90% ganacsiga UK mug ahaan loo qaado badda, badeecadaha qiimaha badan waxaa lagu daabulaa hawada. Heathrow waa dekedda ugu weyn Boqortooyada Ingiriiska qiimo ahaan, taas oo ka dhigan 21.2% ka ganacsiga UK ee badeecadaha qiime ahaan sanadka 2019.
Cilmi-baarista cusubi waxay dib u xaqiijinaysaa muhiimadda ay leedahay moodellada garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee loo yaqaan 'UK post-Brexit' iyo kuwa wax dhoofinaya ee Britain ee ku tiirsan waddooyinka ganacsiga duulimaadyada. Qaabka hubku wuxuu gacan ka geysanayaa sidii loo kobcin lahaa kobaca ganacsiga, iyadoo la mideynayo baahida loo qabo isku xirnaanta adduunka iyo bixinta xulasho badan oo ah meelaha loo socdo rakaabka, ganacsatada iyo ganacsatada, kuwa wax dhoofiya iyo kuwa wax soo dejiya.
Maamulaha Heathrow John Holland-Kaye ayaa yiri: “Heathrow wuxuu si fiican ugu fadhiyaa inuu ka dhabeeyo himilooyinka dowladda Britain ee Caalamiga ah isla markaana uu soo bandhigo xiritaanka ka dib, kicinta dhaqaale ee Brexit-ka ka dib oo qiimihiisu yahay balaayiin rodol. Maaddaama ay tahay garoonka diyaaradaha ee kaliya ee Boqortooyada Midowday iyo dekedda ugu weyn qiime ahaan, waxaan diyaar u nahay inaan door muhiim ah ka ciyaarno abuurista fursado dhaqaale ee ganacsiyada dalka oo dhan, fududeynta heshiisyada cusub ee ganacsiga xorta ah iyo u adeegidda xiriir muhiim u ah lamaanayaasheena ganacsiga ee muhiimka ah. Wasiirradu waa inay ka faa'iideystaan ​​fursadda ay ku xaqiijinayaan kobaca dhaqaale ee muhiimka ah iyagoo taageeraya duulimaadyada Ingiriiska iyo barnaamijkeeda tallaalka iyaga oo si nabadgelyo leh u fududeynaya xayiraadaha socdaalka ee rakaabka si buuxda u tallaalay laga bilaabo 19-kii July.
Wasiirka dhoofinta Graham Stuart MP ayaa faallo ka bixiyay: “Marka aan sii wadno weerarada heshiisyada ganacsiga xorta ah ee aan la leenahay wadamada adduunka, garoomada diyaaradaha ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona hamiga Boqortooyada Ingiriiska - ka soo biiritaankeena ilaa CPTPP ilaa heshiiskii ganacsiga ee dhawaan la saxiixay UK-Australia.
“Ajendeheena siyaasadeed ee ganacsiga wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loo simi lahaa dhammaan qeybaha Boqortooyada Midowday ee UK, loo yareeyn lahaa canshuuraha isla markaana loo jari lahaa cajaladaha casaanka ee ganacsiyada. Taageerada laga helayo waaxda duulimaadyada ayaa gacan ka geysan doonta fududeynta tan, iyadoo la hubinayo safarka xitaa ka fudud ee UK ay u dhoofineyso suuqyada muhiimka ah sida New Zealand, Bariga Dhexe iyo Hindiya. ”
Cilmi-baarista ayaa sidoo kale soo dhaweysay ganacsatada gobolka, iyadoo Dai Hayward, oo ah Maamulaha Micropore Technologies oo fadhigeedu yahay Teesside, wuxuu yiri: “Micropore Technologies Ltd waa shirkad ku guuleysata xallinta tikniyoolajiyadda teknolojiyadda ee waaxda dawooyinka iyo biopharmaceutical. Sababta oo ah dabeecadda caalamiga ah ee ganacsigeenna xarunta garoonku si wanaagsan ugu xiran yahay ee rakaabka iyo xamuulka labaduba waa muhiim. Heathrow waxay siisaa tan, gaar ahaan hadda duulimaadyada maalinlaha ah ee ka imanaya garoonkeenna maxalliga ah, Teesside International, ayaa dib loo bilaabay natiijada Duqa Dooxada Tees, Ben Houchen. Waxaan rajeyneynaa inaan dib u bilaabi karno safarka aan uga soo ambabixi lahayn Heathrow qaybaha adduunka halkaasoo tiknoolajiyadeennu ay ku aaday muddadii cudurku socday. ”
Si loo soo bandhigo shaqada ganacsiyada Ingiriiska kor iyo hoosba waddanka ka dhoofsada alaabtooda iyo adeegyadooda iyada oo loo sii marayo Heathrow, garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale bilaabi doona olole caalami ah oo ah Ganacsiga Ingiriiska bilaha soo socda. Ganacsiyadan ayaa dalka ka hayey ganacsiga sanadkii la soo dhaafay waxaana lagu wadaa inay door muhiim ah ka ciyaaraan wadista Britain caalami ah sanadaha soo socda.